Suuqgeeyayaasha Mawduuca: Jooji Iibinta + Bilaabista Dhageysiga | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 4, 2014 Kelsey Cox
Ma aha hawl fudud in lala yimaado nuxur ay dadku dhab ahaan doonayaan inay akhriyaan, gaar ahaan maadama ay ka kooban tahay hal meel oo tayada marwalba ay ka sarreyso tirada. Iyada oo macaamiisha ay ku qulqulayaan qaddar aad u tiro badan oo maalinle ah sidee uga dhigi kartaa kaaga mid ka sarreeya inta kale?
Qaadashada waqti aad ku dhageysato macaamiishaada ayaa kaa caawin doonta inaad abuurto waxyaabo iyaga la mid ah. Halka 26% ee suuqleyyaashu ay adeegsanayaan jawaab celinta macaamiisha si ay u sheegaan istiraatiijiyadda content, kaliya 6% ayaa hagaajiyay habkan. Mawduuca waa in lagu saleeyaa aragtida macaamiisha ee ku saleysan cilmi baarista, sida sahannada iyo wareysiyada. Weydii macaamiishaada haddii ay u arkeen waxa ku jira inay macno leeyihiin oo ha iloobin inaad dhageysato. Iibku wuxuu soconayaa daqiiqad, laakiin kaqeybgalka macaamiisha wuxuu socon karaa inta uu nool yahay. Xogta hoose ee hoose, Captora wuxuu fiirinayaa meesha dad badan oo suuqleynaya waxyaabaha ay ka maqan yihiin sumadda iyo sida ay u badali karaan ciyaartooda si ay u keenaan ganacsi ay doonayaan.
Tags: Content SuuqinfographicmarketingMacluumaadka Suuqgeyntasuuq-geynta suuqaMedia Social Suuq